ကျွန်တော် မချစ်သော ကြယ်မည်းမည်းကြီးများကို ဝေဖန်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကျွန်တော် မချစ်သော ကြယ်မည်းမည်းကြီးများကို ဝေဖန်ခြင်း
Posted by alinsett on Dec 31, 2014 in Arts & Humanities, Celebrity, Creative Writing, Critic, Drama, Essays.., My Dear Diary | 34 comments
အနုပညာနဲ့ မတန်တဲ့ ကြယ်ပွင့်တွေ... မောင်သူရ ပြောချင်တဲ့စကား
လွန်ခဲ့သော ရက်များအတွက် မထော်မနန်းသတင်းများ ကြားရ /ဖတ်ရသည်။
ပက်ပက်စက်စက် နှိပ်စက်ပြီး သတ်ပစ်လိုက်သည့်သတင်း. . .
(နောက်ပြီး တတိုင်းပြည်လုံး ထိုင်ကြည့်နေသည့် အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကနေ
နောက်ထပ်ကြယ်တပွင့်ကို တိုင်းသိပြည်သိ ကလော်တုတ်ထည့်လိုက်သည့် သတင်း)
အဲ့သည် သတင်းကို ဖတ်ပြီး ကျွန်တော် မဲ့ပြုံးတချက်နဲ့အတူ အံ့သြ နာကျင်မိပါသည်။
သတ်သူနှင့် အသတ်ခံရသူ(ဆဲသူနှင့်အဆဲခံရသူတို့ကြား) မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ ခံစားချက်များနှင့် လုပ်ရပ်များကို ကျွန်တော့်အနေနှင့် ဝေဖန်ပြောဆိုစရာ မရှိချေ။
ဒါပေမယ့် အဲသည် ဖြစ်ရပ်မျိုး အဲသည်လိုလူမျိုးတွေအနေနဲ့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါသည်။
သရုပ်ဆောင် တယောက် သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာ တယောက်သည် တိုင်းပြည်အတွက် ငွေကြယ်တပွင့်ဖြစ်သည်။
သရုပ်ဆောင်တယောက်သည် ဇာတ်ညွှန်းကို ဖတ်ပြီး ဇာတ်ရုပ်ပေါ်အောင်
သရုပ်ဆောင်နိုင်လျှင် တာဝန်ကျေပြီဟု လွယ်လွယ်ကလေး ယူဆလျှင် ရသော်လည်း
ကျွန်တော်ကတော့ ငွေကြယ်တပွင့်မှာ ရှိသင့်သော ”စံ” ကို အဲသည်လို လွယ်လွယ်ကလေး သတ်မှတ်မထားခဲ့။
ကြယ်ဆိုတာ တတ်စွမ်းနိုင်သမျှ အလင်းရောင်နဲ့ လမ်းပြပေးနိုင်ရမည် မဟုတ်လား။
အများပြည်သူက အချိန်ပေးပြီး ထိုင်ကြည့်နေရသော ကြယ်ပွင့်များက
အနေအထိုင် / အပြောအဆို/ အပြုအမူတွေ မတော်တရော်ဖြစ်နေတာမျိုးကတော့
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကြယ်ပွင့်များကို ငေးမောကြည့်ရှုနေကြတယ်လေ… ။
အဲသည် ကြယ်ပွင့်တွေဟာဖြင့် စကားကို ဘယ်လိုများ ဆွဲတောင်မှုရှိရှိ ပြောသွားသလဲ???
ဘယ်လိုများ အဆင့်အတန်းရှိရှိ ပြောဆိုပြထားသလဲ ??????
အဝတ်အစား ဖက်ရှင်ကို ဘယ်လိုများ
စမတ်ကျကျ ဝတ်ဆင်ခြယ်သ ပြသွားသလဲ ?????
သူရဲကောင်းဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်တကောင်အဖြစ် ဘယ်လို လုပ်ရပ်ကောင်းတွေနဲ့ သရုပ်ဖော်ပြသွားသလဲ . . .??? စသည်ဖြင့်
နှုတ်ခမ်းအလှုပ်/ ခေါင်းအငဲ့နှင့် မျက်လုံးအဝင့်ကိုပင် ကြည့်ရှုငေးမောနေကြရတာ မဟုတ်လား။
သိပ် အားကျငေးမောချင်စရာ အဆင်းနဲ့ပြည့်စုံနေသော ငွေကြယ်ဆိုလျှင် . . .
သူ ပြောဆိုသည့် ဟန်များ . . .သူ ဝတ်ဆင်သည့် အဆင်ဒီဇိုင်းကလေးများက အစ
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ငွေကြယ်များကို ပရိသတ်နေရာမှ ငေးမောကြည့်ရှုရင်း . .
အကဲဖြတ်/ အကဲခတ်နေရင်းမှပင် နှစ်သက်ရာ ဟန်ပန်မူရာများ. . .
ထိုအချက်သည် . . .ငွေကြယ်များနှင့် ပရိသတ်များအကြား
တကယ်လို့များ သင်ဟာ ပရိသတ်ကို တကယ်ချစ်သော. .
တိုင်းပြည်ကိုလည်း တဖက်တလမ်းက အလင်းပြချင်သော ကြယ်တပွင့်ဆိုပါစို့။
အဲ့သည် ကြယ်ကို ငေးမောကြည့်ရှု အကဲခတ်နေသော ပရိသတ်ထဲမှာ အတုယူဖို့အသင့်ဖြစ်နေသော စူးစမ်းသင်ယူနေသည့် လူငယ် ပရိသတ်လည်း ရှိနေမှာပဲ။
ဒါဆိုရင်တော့ သင်ဟာ သင့်တိုင်းပြည်ထဲက . . ./
သင့်ကို ငေးမောကြည့်ရှုနေသော ပရိသတ်ထဲက . . .
တချို့သော လူငယ်များကို ဒါတော့ လုပ်သင့်တယ်. . .ဒါတော့မလုပ်သင့်ဘူး. . .
စကားဆိုတာ ဒီလိုပြောရတယ်. . ဒီလိုတော့ မပြောသင့်ဘူး . . .. . .. . စသည်ဖြင့်
(ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာ/အတွေးအခေါ်က. . .အစ) ကောင်းတာတွေ အတုယူနိုင်အောင် ရှေ့ဆောင် လမ်းပြပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဲသည်လိုမှ မဟုတ်ဘဲ ကြယ်ပွင့်ကစ မှားပြနေလျှင် . . ./ ကြယ်ပွင့်က. . .စပြီး
မတော်တရော် လုပ်ပြနေလျှင် . . .
ပရိသတ်ချစ်သော ကြယ်ပွင့် မဖြစ်နိုင်သည့်အပြင်. . .
သမိုင်းမဝင်သောကြယ်. . .အသုံးမဝင်သောကြယ်သာ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
ချစ်သော ကြယ်ပွင့်များဆီက အလင်းရောင်ကိုသာ မျှော်လင့်ပါသည်။
မတော်တရော် လုပ်ပြတတ်သော. . .
အစွန်းအထင်းများနှင့် အသုံးမဝင်သော. . .
ကြယ်ပွင့်များကို အချိန်ကုန်ခံ ငွေကုန်ခံပြီး ထိုင်ကြည့်နေရလောက်အောင်လည်း
ကလိတိတိဖြစ်သွားစေသော အကြောင်းရင်းခံထဲမှာ နောက်တချက် ရှိပါသေးသည်။
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ တိုင်းသူပြည်သား ပရိသတ်များက စံနမူနာပြုထားရလောက်သော. . . အတုယူလေးစားရလောက်သည့် ငွေကြယ်ရယ်လို့သာ မည်မည်ရ မရှိတာ. . .။
ဒါပေမယ့် …အပြဲအကွဲ သတင်းဆိုးများနှင့် အနံ့ဆိုး တထောင်းထောင်းထနေသော ကြယ်ပွင့်များကတော့ တော်တော်များများကို တွေ့နေရသည်။
လွယ်ကူပေါ့ပျက်စွာ ပြုမူပြနေရက်သော ကြယ်များကို
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ငွေကြယ်အဆင့် မသွင်းချင်။
ရွှံ့တောင်မှ ဖြူသော ဝါသော ရွှံ့မဟုတ်ဘဲ မည်းညစ်သော ရွှံ့ကြယ်များသာဖြစ်သည်။
ခက်တာက ထိုအနက်ရောင်ကြယ်တွေဟာ ဘယ်တော့မဆို
သူတို့ကိုယ်ကို သူတို့ အနုပညာရှင်/ အနုပညာသည်/ အနုပညာသမား စသည်ဖြင့်
အမည်တပ်ပြီး အနုပညာနှင့် ပူးတွဲတံဆိပ်ကပ် သတ်မှတ်လျက် ရှိကြသည်။
အဲဒါကိုလည်း ကျွန်တော် မကျေနပ်ပါ။
အနုပညာဆိုသောအရာကို မတော်တရော် ကြယ်မည်းမည်းကြီးတွေလက်ထဲ
အဲ့သည်ကြယ်မည်းမည်းကြီးတွေနှင့် ကျွန်တော်ချစ်သော အနုပညာ ဘယ်လိုမှ
ပုပ်နံ့ထွက်နေသော အနက်ရောင်ကြယ်များကို အနုပညာဆိုသော အရာနဲ့တော့
မလွှမ်းခြုံသင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော် ယူဆသည်။
ကျွန်တော်က အနုပညာဘက်က ”နာ”သူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
အနုပညာဆိုသည်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်ယူလို့ရသော အရာမဟုတ်။
အနုပညာသည် ဈေးထဲက ကန်စွန်းရွက်/ ချဉ်ပေါင်ရွက်မဟုတ်။
အနုပညာသည် သီးခြားစွာသော ဂုဏ်သတ္တိ်များဖြင့်
သီးခြားစွာ ရပ်တည်နေသော အရာဖြစ်သည်။
ထိုအရာကို ဖန်တီးသူသည် လွယ်လွယ်ကလေး ပြုမှု/ ပြောဆို/ရေးသား ဖန်တီးလိုက်ခြင်းမဟုတ်။
အနုပညာကို ပညာရပ်တစ်ခုအဖြစ် လေ့လာတတ်မြောက်စရာမလိုသော်လည်း
ကိုယ့်ကို အများက သော်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ထားနိုင်ဖို့ရာ
ပေါ့ပေါ့ဆဆ လုပ်ယူ၍ မရ။
အနုပညာအရာမှာ ‘‘သမား” အဆင့် ဝင်ဖို့ဆိုတာလည်း
တီတီတာတာ ပလီပလာနှင့် လွယ်လွယ် ပြောဆို သတ်မှတ်လိုက်ရုံဖြင့် မရနိုင်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အနုပညာသမားအဖြစ် သတ်မှတ်နေလျှင်
ပါးစပ်က ပြောထွက်ရုံလောက်ကတော့ ကြက်တူရွေးတကောင်ကလည်း ပြောထွက်သည်။
တကယ့် အနုပညာ/ တကယ့်အနုပညာသမားများ၏ အမြင်မှာတော့ ရယ်စရာသာ ဖြစ်လိမ့်မည်။
အနုပညာရှင်ပါဆိုပြီး သူတို့ကို သူတို့ ခံယူသော ကြယ်ပွင့်မည်းမည်းကြီးများသည်
မတော်တရော် လုပ်ရပ်များနှင့် ပရိသတ်ရှေ့ထွက် လူလုံးပြနေလျှင်…
ကြာသောအခါ အနုပညာအတွက် သိက္ခာကျစရာဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်ကတော့ . . .အနုပညာကို ချစ်သည်။
ကိုယ်မှာ တံဆိပ်ကပ်ပြီး မဟုတ်တရုတ်တွေ လုပ်ပြနေသော
ချစ်သော အနုပညာ. . . အနံ့ဆိုးတွေကြား ရောက်မသွားဖို့
(လိုအပ်လျှင်)လက်သီး လက်မောင်း တန်းသင့် တန်းရပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော် မျှော်လင့်သည်က …
အနုပညာကို တကယ်ဖန်တီးပြသနိုင်သော . . . . . .
”အနုပညာရှင်” ဆိုသော အမည်နှင့် ထိုက်တန်၍
တင့်တယ်သော ငွေကြယ်ပွင့် ဖွေးဖွေးလက်လက်များသာ ဖြစ်သည်။
အနုပညာရှင်ဟု အမည်တပ်ပြီး မည်းညစ်ပုပ်ပွနေသော
မတော်တရော် ပြုမှုပြတတ်သည့် ကြယ်မည်းမည်းကြီးများကိုတော့
အနုပညာရှင်အဖြစ် စာရင်း မသွင်းသင့်ဘူးဟု ယူဆမိသည်။
စကားလုံးများနှင့် ပြောဆိုခြင်းပင် မထိုက်တန်မှတော့ . . .
အဲသည် ကြယ်မည်းမည်းကြီးများကို အနုပညာရှင်အဖြစ်
အသိအမှတ်မပြုရုံမျှမက. . .
သူတို့လို အနက်ရောင် ကြယ် အကွဲအပြဲကြီးများကြောင့် ..
အနုပညာဆိုသော စကားလုံးကလေး ဂုဏ်သရေကျဆင်းမှာကို စိုးရိမ်မိပါတော့သည်။ ။
၂၀၁၄၊ဒီဇင်ဘာ၊ ၃၀ ရက်၊
အရင်က ကားဟောင်းတွေပြန်ကြည့်ဖြစ်ရင် ခုနောက်ပိုင်းဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကအစ၊ သရုပ်ဆောင်တာကအစ ကွာတာတွေ အများကြီး….။ ခုကဖလင်တွေ ပေါနေတော့လဲ….
လူတိုင်း ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နေရာက မြင့်လာလေလေ…ကိုယ့်တာဝန်ယူမှုကလဲ မြင့်လာလေလေပဲလို့ ထင်တယ်…။
ကလေးတွေ အတုယူမှားမှာကိုတော့ … စိတ်ပူပါတယ်..
Professional နဲ့ Personal ခွဲမြင်လိုက်ရင်တော့ အဆင်ပြေသွားလေမလား…
တစ်ခုရှိတာက သာမန်လူတွေလဲ ကောင်းသူ ဆိုးသူရှိပါတယ်.. သွားဝေဖန်ကျိ.. ပါးကွဲသွားမာပေါ့
သူတို့ကျတော့ ကြိုက်သလို ကလော်တုတ် သီးခံရတယ်လေ သူတို့ Professional အရ ..
ပုထုဇဉ်ဆိုပေမယ့်.. သူတို့က… သာမန်မဟုတ်ဘူးလေ…
မတော်တရော် လုပ်မပြသင့်တဲ့ အနေထားနဲ့ ရပ်တည်နေရတဲ့ ပုထုဇဉ်တွေ…
သာမန်လူတွေက မတော်တရော် ဘယ်လောက်လုပ်လုပ်…
သူ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကွက်ကွက်ကလေးပဲ..မြင်မှာ..
ဒီ ကြယ်တွေက..မတော်တရော်လုပ်ရင်တော့ တိုင်းသိပြည်သိ..မြင်မှာ…
ပြောရမယ်ဆိုရင် အနုပညာကိုချစ်လို့ ဘာလို့ နဲ့ပြောနေတာကို
ပြီးမှ တောက်တလွဲတွေ လုပ်တာ။
အနုပညာဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့.. သူတို့ကို..မအပ်မစပ်လို့ပဲ..မြင်တယ်..
Wow.. ​ပြောသလိုပဲ..ပ​ရောဖက်​ရှင်​နယ်​နဲ့ပါစင်​နယ်​ကိုမ​ရောသင့်​ဘူး။ ငြင်​ခုန်​ခြင်းအနုပညာပြီး​တော့ ဆဲဆိုခြင်းအနုပညာ​ပေါ့။ အမှတ်​တမဲ့ထွက်​သွားတဲ့ပုံ​ပေါက်​ပါတယ်​။
ကျနော် မောင်သူရကတော့.. .ဆဲဆိုခြင်းနဲ့ ငြင်းခုန်ခြင်းကို အနုပညာစာရင်း မသွင်းရေးချ မသွင်းးး
အနုပညာမှာကိုထဲက “၀ီဘစ်ဆ” ရသ (ဦးဇင်းဝီနှင့် အဆိုတော် ရသ မဟုတ်)
ဆိုတာရှိတယ် ၀က်ရဲ့ :hee:
အနုပညာ ​မြောက်​​အောင်​ ငြင်းခုံဆဲဆိုတာမ​တွေ့ကြုံဖူး​သေးလို့ပါ ။
ဆဲဆိုခြင်းဟာ အနုပညာမြောက်ကြေးဆိုရင် ဦးကြောင်တို့ ဦးဂျော်နီပုတို့က အနုပညာရှင်တွေပဲ
ငြင်းခုန်ခြင်းဟာအနုပညာ မြောက်ကြေးဆိုရင် သူကြီးကစ ရွာသူားတော်တော်များများဟာ အနုပညာရှင်ကြီးတွေပဲ
Art isadiverse range of human activities and the products of those activities. In their most general form these activities include the production of works of art, the criticism of art, the study of the history of art, and the aesthetic dissemination of art. This article focuses primarily on the visual arts, which includes the creation of images or objects in fields including painting, sculpture, printmaking, photography, and other visual media. Architecture is often included as one of the visual arts; however, like the decorative arts, it involves the creation of objects where the practical considerations of use are essential—inaway that they usually are not inapainting, for example. Music, theatre, film, dance, and other performing arts, as well as literature and other media such as interactive media, are included inabroader definition of art or the arts. Until the 17th century, art referred to any skill or mastery and was not differentiated from crafts or sciences. In modern usage after the 17th century, where aesthetic considerations are paramount, the fine arts are separated and distinguished from acquired skills in general, such as the decorative or applied arts.
“Art ဆိုသည်မှာ လူသားတို့၏ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသော လှုပ်ရှားမှုများနှင့် အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ထုတ်ကုန်များကို ဆိုလိုသည်။”
အနုပညာရှင် creater တွေရှိရမဲ့ အရည်အချင်းတွေ definition ထဲမှာ မပါဝူးဟ..
ဒါပေမဲ့ the criticism of art ဆိုဒါလဲပါတော့.. ကိုယ်လိုရာဆွဲ ဝေဖန်ဂျဒါပေါ့… ဒါလဲ အနုပညာပဲ
မြန်မာနိုင်ငံက လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့..အနုပညာရှင်ပါလို့..ပြောပြောနေတဲ့
ကျနော်က..အနုပညာရှင် စာရင်း မသွင်းရေးချ မသွင်းးးး
ဒီလိုရှိဒယ် ၀က် ရဲ့.. အဲလေ ဆက်ဆက်ရဲ့..
နှစ်သစ်မာ နင်နဲ့စ ငြင်းနေရတာသိပ်တော့မကောင်းဝူး..
လူဆိုတာက ဘုရားရဟန္နာမှသာ အပြစ်ကင်းဂျဒါမလား… ဒါက ဗုဒ္ဒဘာသာ
ရွာထဲက ပြည့်တန်ဆာမအိမ်ကို ခဲနဲ့ဝိုင်းပစ်မယ့် ရွာသားတွေကို ယေရှုက မပြစ်နဲ့လို့မတားပါ… ဒါပေမဲ့ သင်တို့ထဲက အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာ မလုပ်ဖူးတဲ့သူတွေသာ ပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ တစ်ရွာလုံး ဘယ်သူမှ ခဲနဲ့မပြစ်နိုင်သလိုပေါ့…
မွတ်စ်ကတော့ ကကြောင်ပြောဒါ ဒဂျီးမာမွတ်ခိုင်မေးကျိဒဲ့..
ဆိုတော့ နိသတ်မှတ်တာ မသတ်မှတ်တာ နိအပိုင်း၊ နိကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ခွင့်…
ဒါပေသိ… ဖြည့်ကျိလို့ရရင်ကျိ.. ဒါမှမဟုတ် မကြိုက် မကျိနဲ့ပေါ့အေ… အကုသိုလ်ကင်းတာပေါ့…
အကုသိုလ်မမြင်ရ မကြားရ ဆိုတာမျိုးက ဆုတောင်းယူရတဲ့ ကုသိုလ်လေ..
ကိုယ့်မှာ ပါမလာရင် ကွကိုယ် ကြိုးစားကျိပေါ့ .. အာ့လေးးးးး
ဖြည့် ကြည့်ပေးလို့ မြဦး… အဲလေ..မရဘူး
.ကျုပ်ကလည်း Professional နဲ့ Personal ခွဲမြင်မိတယ်…သူလည်းလေပုထုဇင်ပေပဲ :p:
သူတို့ရဲ့ Personal က တိုင်းသိပြည်သိ ဖြစ်နေတဲ့အခါ…
အဲဒီ တိုင်းသိပြည်သိ Personal ကလည်း…စိတ်ပျက်စရာ သတင်းဆိုးတွေ ဖြစ်နေတဲ့အခါ….
ကျနော်က… အနုပညာသမားတစ်ယောက်ဟာ…ပြောသလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက်မခံပါဘူး ။
ဦးသုမောင်ကြီး သူကိုယ်တိုင် အရက်သောက်ပြီး..အရက်မသောက်သင့်ကြောင်း..စာတွေရေးတာကို
သူ့ အနုပညာနဲ့… သူ့ လုပ်ရပ် ထပ်တူကျရမယ်လို့… မဆိုလိုဘူး ။
ဒါပေမယ့် .. နိုင်ငံ့ မီဒီယာ စာမျက်နှာပေါ်က…ကြယ်ပွင့်တွေကတော့…
ဦးသုမောင်ကိုတော့ အရက်သမားအမှားတစ်ထောင် ထင်တယ်။အဲဒီ စာအုပ်ဖတ်ပြီး ပိုတောင် ချစ်မိတယ်။အမှန်တော့ ရိုးသားမှု ၊ဟန်မဆောင်မှု ရှိရင် ချစ်ဖို့ကောင်းတာပါပဲ။
ဆိုတော့ ကျနော်တို့က ရလဒ်ကို ဦးစားပေး ကြည့်ပါတယ်။
ဦးသုမောင် မူးမူးနဲ့ ရေးထားတဲ့ အရက် မသောက်သင့်ကြောင်း လူငယ်တွေကို ပဲ့ပြင်တဲ့စာကို အမူးသမားက ရေးထားတာကြီးဆိုတဲ့ အတွေးကို ချန်ပြီး
အကျိုး ရှိတဲ့ စာ ဟုတ် မဟုတ်
အဲ့ဒီ ရလဒ်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။
ဒါက စာပေ အနုပညာပိုင်းပါ။
ပရိသတ်ရှေ့မှာ စံနမူထားရလောက်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ပြနိုင်ရမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကို သရုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ ဇာတ်ကောင်ရဲ့သဘောသဘာဝအရ လူဆိုးကြီး ဖြစ်နေဦးးးတော့
နောက်ဆုံးမှာ လူဆိုးတို့ရဲ့ သွားရာလမ်းကို ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင် ပြရတာပဲလေ။
နိုင်ငံရဲ့ကြယ်ပွင့်အနေနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားပြီး
အတုယူအားကျရလောက်အောင် နေပြသင့်တယ်လို့ထင်. .
အန်ကယ် တင်ဝင်းလှိုင် ကိုတော့ နောက်ထပ် အကယ်ဒမီ ထပ်ပေးချင်တာ။
အဲ့အန်ကယ်ကြီး အဲ့ဒီစင်ပေါ်မှာ အဲ့လိုတွေ ပြောသွားလို့တော့ဖြင့် အကယ်ဒမီ ထပ်မပေးချင်
ကွင်း အရွေးမမှားဖို့တောင် သတိပေးလိုက်ချင်သေး. . .
လူမင်းက မိုက်က သူနဲ့နီးနေမှန်းမသိလိုက်တာဖြစ်မှာပါ။ သူပြောပုံကလည်း အချင်းချင်းစနောက်ပုံပြောလိုက်တာ မိုက်ကရိုဖုန်းကြောင့် အကျယ်ကြီးထွက်သွားခဲ့တာ။ မင်းအုပ်စိုးလုပ်ရပ်ကတော့ အစကတည်းက မကြိုက်ခဲ့တာပါ။ တကယ်တော့ တစ်ခါတစ်လေကျရင် လူတစ်ယောက်အနုပညာနဲ့ သူရဲ့ ပါစင်နယ်ကို ခွဲခြားကြည်သင့်ရင် ကြည့်ရမယ် အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်။
အဲ့ဒီ လူဟာ… တိုင်းပြည်ရဲ့ မီဒီယာတွေပေါ်က..ကိုယ်ဟန်ပြသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေရင်တော့…
သူပြတဲ့ ကိုယ်ဟန်နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဟာ.. ညံ့ဖျင်းနေဖို့မသင့်…
သူရဲ့ သတင်းကအစကတည်းမကောင်းတာပါ။ ဒါမယ့် အဲသည်ကိစ္စမှာတော့ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲ မြင်မိတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အချို့ ကိစ္စတွေမှာ လူတစ်ချို့ဟာ Artist နဲ့ Art ကို ခွဲခြားမမြင်တတ်ကြဘူး။
Artiste က သဘင် အနုသုခုမ ပညာသည်ပေါ့..။ Artist ကျတော့ စာပေ၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု ပညာသည်ပေါ့။
အနုပညာ ကျတော့ အလှနဲ့ ရသကို ဖော်ထုတ်တာ။ လောကထဲမှာ ပုန်းခိုနေတဲ့ အလှကို ဖော်ထုတ်မယ်။
ရသကို ပေးမယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပေးတယ်၊ ဘယ်လို ဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတာ အနုပညာသည်ရဲ့ အစွမ်း
အရပေါ့။ The Art of bhalar bhalar တွေကျတော့ အနုပညာ စာရင်းထဲ သွင်းလို့ကောင်းမလား။
သူက အတတ်ပညာပဲ..။ နို့ပေမဲ့ အနုပညာကို ဖော်ထုတ်ဖို့ကျတော့ အတတ်ပညာလည်း လိုမှာပေါ့။
မောင်သူရပြောတဲ့ ကြယ်မဲတွေကို အနုပညာရှင်အဖြစ် စာရင်းမထည့်တာတော့ ကိုယ့်အနေနဲ့ သဘော
ဒီအောင်သျဲလင်းကတော့ ငွေကြယ်ပွင့် လက်တာတောင်သူ့ဟာသူမလက်ရဝူး
ဖွေးဖွေးပါထဲ့ လက်ခိုင်းနေသေး ဒဂယ်မလွယ်
မိုက်နဲ့နီးလို့ လူအများကြားသွားရတာက ဆိုးတာ။
ပြောမနာ ဆိုမနာ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကြားထဲမှာဆိုရင်လည်း
လူအများရှေ့စကားပြောတဲ့အခါကျတော့လည်း သူ့အခြေအနေနဲ့သူ ယဉ်ကျေးပြူ ငှာ ရှိဖို့လိုပြန်ရော။
ပါစင်​နယ်​ ပရို အတတ်​နိုင်​ဆုံး ခွဲမြင်​ဖို့ ကြိုးစား​လေ့ရှိပါတယ်​
အခု​ခေတ်​ကြယ်​ပွင့်​​တွေအကုန်​ နီးပါး ပရို ​ရော ပါစင်​​ရော တ​ယောက်​မှ အထင်​မကြီးဘူး
အ​ရေထူ​အောင်​ ကျင့်​မလို့ ဟီး :loll:
-FM ကလွှင့်တဲ့ ချမ်းချမ်း အင်တာဗျူးလေးပြောပြမယ်…
…ဟွာလေ ချမ်းချမ်း အရမ်းကြိုးစားထားတယ်သိလား
…..ပရိသတ်သိပီးသား သီချင်းလေးတွေကို လိုက်ဆိုလို့လဲ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားပေးတယ်
…..Taylor Swift သီချင်းလေးတွေ Colbie Caillat သီချင်းလေးတွေကို ကော်ပီကူးထားတာပေါ့နော်..
-သများတော့ သူ့အသံကြားတိုင်း စိတ်နာနေရော
အသားအရောင် ခွဲခြားခြင်းတွေ ရပ်ပါ.. ဆက်ဆက်… လူမင်း မည်းတာ… မင်းအုပ်စိုး မည်းတာ… ဘာဖြစ်လဲ လိုက်တင်ပေးလိုက်ရင် အဲဒါ ရုပ်ပိုထွက်တယ် ဟ…
မင်းအုပ်စိုးရဲ့ သရပါစာစောင်ကို အများကြီးဖတ်ဖူးတယ်.. ရသစာကို အရမ်းအလေးပေးထားတယ်.. သူကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုလည်း ကြိုက်မယ်တယ်… ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ ထပ်တူညီရမယ် ထင်တာပဲ..
ကြားဖူးတယ်.. ကြယ်ပွင့်တော့ မဟုတ်ဘူး.. ဒါပေမယ့် သူက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူမှုရေးအရမ်းလုပ်တဲ့သူပေါ့… အဓိကက အမှိုက်ကောက်တာ… သူ့ရဲ့ ဖဘ မှာဆိုလည်း အမှိုက်ကောက်ဖို့ နှိုးဆော်ထားတာတွေ အများကြီး.. အမှိုက်ကောက်ဖို့ ကိစ္စတွေမှာလည်း သူက ရှေ့ဆုံးက တက်ကြွတယ်…